७५ वर्षअघिको नमुना आर्थिक सर्भे-रिपोर्ट | रक्त न्युज
वास्तवमा त्यसबखत ग्रामीण जनता ऋणको मारले सोत्र्यान्न परेका पनि थिए । कारण, गाउँघरमा ढ्याके, आनेजस्ता चर्का व्याजको दर मात्र त्यसबेला कायम थिएन, मख्खिचुस गाउँले साहुको असामीप्रतिको व्यवहार पनि अति अमानुषिक थियो । असामीलाई साहुले एक रुपैयाँ पर्ने पाठो किनी जक्खु खसी बनाई ल्याउन लगाउँथे र असामीले आफ्नो घरको बित्न लागेको काम पर सारी, गाँस टिपेर साहुको घरको काम छोप्न जानुपर्दथ्यो । यी सबै व्यहोरा मे.ज. विजयमार्फत श्री ३ जुद्धका जुनाफमा सर्भे डोरले पेस गरेको लामो प्रतिवेदनमा प्रस्ट औँल्याएको थियो भन्ने कुरालाई सो प्रतिवेदनको निम्न छोटो उतारले साबित गर्दछ ।
‘गाउँलेलाई धेरैभन्दा थोरै दिनको निमित्त रास (पुँजी) को दरकार पर्दछ । बाली सेर्मा तिर्न, नुन खेप्न, कपडा धागो किन्न, छोटा इलम गर्नलाई साहुकहाँ ऋण लिन जानुपर्दछ । जति थोरै दिनको निमित्त कर्जा लियो उति चर्को ब्याज तिर्नुपर्दछ । ग्रामीण साहुहरूको, आफू डेग नचलीकन, सजिलैसँग उम्रने, असल खेती, पैसा ब्याजमा लगाउँछ । पहाडतर्फ अनेक किसिमका ब्याज चालू छन्– ढ्याके, आने, खेपे, नुने, चारमाने, पाथी इत्यादि ।’
‘सात गाउँ– धुलिखेल, पनौती, बनेपा, खडपुतर्फ ढ्याके ब्याज, पाँगा, दाप्चा र तिमालमा आने र लिस्तीतिर नुने ब्याजको ज्यास्ता चलन रहेछ । साहुको जात र पुँजीको मात्रा हेरेर घिउ, बोको, खसी, रक्सी इत्यादि कोसेली खाएपछि साहुले कर्जा दिनलाई अनि विचार गर्दछ ।’
‘साहुको मनले खायो भने अर्थात् उसलाई पैसा सापट दिनाले आफ्नो थैली डुब्दैन भन्ने निश्चय भएपछि, सयकडा पाँच घिउखानी कटाई महिनाको आने, छ्याके ब्याज र एक रुपैयाँको एक खेतालो सित्तैमा लिने सर्तमा पैसा सापट दिँदोरहेछ । दुर्भाग्यवश आसामी निर्धो छ भने मालदार जमानीबेगर साहुले पैसा खुस्काउन्न । जमानी बसेबापत एक रुपैयाँको एक खेताला नपाएसम्म लाटो पनि जमानी बस्दो रहेनछ । हरेकतर्फबाट यसरी गरिब थिचिन्छ ।
‘ढ्याके, आने ब्याजभन्दा कडा नुने ब्याज छ । यस किसिमको ब्याज भोटमा नुन खेप्न जाने मानिसलाई मात्र लाग्दोरहेछ । नुन खेप्न जानेले रासकाडेको खण्डमा पन्ध्र दिनमा एक रुपैयाँको आधा माना नुन ब्याजमा तिर्नुपर्दछ । यस हिसाबले एक सय रुपैयाँको नुन खेप्नेलाई ऋण दिन सक्यो भने सालभरमा एक सय बयानब्बे रुपैयाँ साहूले सूद पाउँछ ।
‘पहाडतर्फ साहु नकाढीकन घरेलु इलमीलाई साध्यै छैन । इलम गर्न काढेको ऋणको सूद प्रायः चर्को हुन्छ । दुर्भाग्यवश गरेको इलम रड्कन गयो भने सावाँ, ब्याज दुवै अड्कन्छन् । त्यसरी रोकिएको ब्याज सावाँमा गाभिएर अर्को साल सूद झन् बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । कति मानिसको त यसरी सावाँ–ब्याज रोकिएर दुई–तीन सालैमा रास तेब्रिएका दृष्टान्त पाइए । बिनारास इलम चल्दैन । हिम्मत बाँधी इलम गर्न खोज्यो भने पनि, चर्को ब्याजको तीतो स्वादले त्यसको मन मारिदिन्छ । तैपनि हुन्छ कि भनेर ऋण काढ्ने मानिसको घर, घडेरी उड्दछ ।’
‘किन गोर्खालीले आसामको कालाजार खप्तछ, बङ्गालीको दरबान बस्दछ र पठानको गोलीको निशाना बन्न जान्छ ? यी सवाल ताजुब लाग्दा छन् । वास्तवमा ताजुब मान्नुपर्ने कुरा पनि हो । तर, गोर्खालीले जुन गोता गाउँले साहुको हातमा खान्छ, त्यसको त यिनीहरूसँग तुलना हुँदैन । ऋणको प्रचण्ड आक्रमणले पहाडतर्फ चापिरहेछ । गरिब मानिस भूतजस्तो ऋण लाग्ला भनेर डराउँदछ । तर, कडा आवश्यकतासँग कसको के लाग्दो रहेछ ।’
प्रो. भीमबहादुरले तयार गरेको यो प्रतिवेदन प्रजातन्त्र आउनुभन्दा सात वर्षअघि राणा सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई मे.ज. विजयले पेस गरेका थिए । राणाकालमा पनि प्रधानमन्त्रीसँगको दर्शनभेटमा नेपालमा त्यसबखत विद्यमान वास्तविक आर्थिक स्थिति जस्ताको तस्तो निर्धक्कसँग भन्ने र लेख्न चाहने र हिम्मत गर्नेलाई भन्ने र लेख्न छुट थियो भन्ने कुराको सो प्रतिवेदनले साबित गर्दछ । तर, जो पायो त्यसले त्यस्तो खालको प्रतिवेदन लेख्दैनथे र तालुकवालाले पनि श्री ३ मा जाहेर गर्दैनथे– नदुखेको कपाललाई डोरी लगाएर दुखाएझैँ होला भनी ।
हाम्रा धेरैजसो घरेलु उद्योगहरू प्रथम महायुद्धपछि नै उठ्न नसक्ने गरी थचारिएका थिए । दोस्रो महायुद्धमा जापान पनि लडाइँमा सरिक भएको कारण रङ्गीचङ्गी जापानी सामानको नेपालमा स्वतः अयात रोकिएको र लडाइँको कारणवश भारतमा पनि उपभोग्य मालको अभाव भएको थियो । चर्को ब्याज, सीमित पुँजी, सरकारी प्रोत्साहनको अभावले, आवश्यक औद्योगिक कोरा जिनिसको बेलामा किन्ने र तयारी माल बिक्री–वितरण गर्ने निकायको कमी र खास गरेर घरेलु उद्योगमा काम गर्ने इलमीले अति थोरै मजदुरी अथवा नाफा पाउने हुँदा पहाडतर्फ घरेलु इलममा कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन । यस्ता अवरोधको बाबजुद पनि पहाडतर्फ त्यसबखत थोर–बहुत घरेलु इलम चालू थिए– कृषि व्यवसाय नफस्टाएको र अरू व्यवसाय नहुँदा ।
खास गरेर ऋणको प्रकोप र चर्को व्याज घटाउनेतर्फ कुनै सही कदम यथाशक्य चाँडो नचालिएको खण्डमा पहाडी जनताको कुनै हालतमा पनि उद्धार गर्न सकिन्न भन्ने ठहर साथ निम्न सुझावहरू उक्त प्रतिवेदनमा विशेष जोडसँग औँल्याएका थिए –
(त्यसबखतको नेपाल, लेखक सरदार भीमबहादुर पाँडे)
अघिल्लो लेखमाअसंलग्न आन्दोलन: बदलिँदो सान्दर्भिकतामाझ प्रधानमन्त्री केपी ‌ओलीको सुझाव
अर्को लेखमादुनियाकै धनी बेजोसले एक दिनमै गुमाए ७ अर्ब डलर